Ra’iisul wasaare Kheyre iyo xukumadiiisa oo la riday. [Video]
Muqdisho:-Guddoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in Baarlamaanka uu saaka kalsoonidii kala noqday xukumaadda ra’uusul wasaare Xasan Cali Kheyre.
Gudoomiyaha golaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in cod la qaaday ka dib 170 xildhibaan ay kalsoonadii kala laabteen xukuumadda Ra’iisul wasaare Xassan Cali Kheyre halka ay diideen ilaa 8 xildhibaan.
Gudoomiyaha golaha baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqay madaxweynaha dowladda Federaalka Somaaliya Maxamed Abdullaahi Farmaajo inuu si dhaqso ah u soo magacaabo ra’iisalwasaare cusub.
Xarunta golaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ka dhacay buuq iyo fowdo ka dib markii wasiiro ka tirsan xukuumada Ra’iisul wasaare Kheyre iyo Xildhibaano ka tirsan golaha baarlamanka ay ka biyo diideen qaabka loo riday xukuumadda iyagoo ku tilmaamay mid aan sharci ahayn.